Mumashure meangu Huge Political Post | Martech Zone
Mumashure meangu Huge Political Post
Chitatu, November 5, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Dzimwe nguva ndinofunga kuti vaverengi veblog rangu vakanyatso kundiziva pamusoro pemakore. Nezuro ndakatumira blog kutumira ndichibvunza kana Obama aive anotevera Vista. Wow, chakasimudzira moto zvakadii! Iwo akateedzana ezvekutaura aive nehasha kubva kuruboshwe uye kurudyi zvekuti ndakaramba kutumira mazhinji emashoko.
Yangu blog ndeye Kushambadzira uye Tekinoroji blog, kwete yezvematongerwo enyika blog. Zvangu kusetsa yaive nechinangwa uye ndainyatsotora mukana wekuzivikanwa kwesarudzo iyi. Sezvandakamuka mangwanani ano ndikaona kuti Barack Obama ndiye Mutungamiri-Wedu, ndinomira pambiru uye, kwete tariro chete, asi namatira kuti Obama anovanunura pane shanduko yaakavimbiswa. (Sevanhu vanozvimiririra, zvakadaro, ini handina tariro.)
Kune avo vanobva ku ruboshwe izvo zvakandirwisa zveichi posvo, iwe unonyatsoda kumisa ruvengo nekurwiswa kunotyisa kune chero munhu anobvunza vatungamiriri vako. Kubvunza masimba chikamu cherusununguko rwandakarwira ini nevamwe munyika ino uye ibasa redu sevagari venyika yakasununguka kubvunza hutungamiriri nekuvabata kuti vazvidavirire. Ini ndanyadziswa kwazvo mumashoko akanyorwa kwandiri. Handisati ndambofarira zvematongerwo enyika uye ndinofunga zviri pamoyo pekuti nei tiine kupesana kwakadai munyika ino.
Mhedzisiro irony, chokwadi, ndeyekuti ini akatsigira Obama kuburikidza neyekutanga uye anga achiudza vana vangu kushamisika zuva mune nhoroondo zvingave kana akasarudzwa mutungamiri wenyika. Yakanga iri chete mushure mesarudzo yaObama yaBiden seMutevedzeri weMutungamiriri, ndakamira kutsigira danidziro yake
Kune avo vari pa rudyi, inguva yekuti iwe utarise zvakadzama maitirwo awakaita simba rako. Pawakave nemukana wekutungamira nyika ino, tsvaga mikana yekusvika kumhiri kwemabara, uye utungamire WESE MUNHU kuenda kuchiroto cheAmerica, iwe pachinzvimbo iwe wakatungamira nehubris uye ukasateerera avo vaikuda zvakanyanya.
Zvaive zvinotyisa kutarisa zvawakaita kuRepublican Party uye kurasikirwa kwako imhosva yako chete. Usazvipa mhosva pane vezvenhau - iwe wakapa chikafu kune avo vaigara vachirwa newe.
Izuva Rakanaka kuAmerica
Ndakagara ndiri munhu anozvikudza weAmerica, asi nhasi izuva rakanaka. Zvisinei nekuti makore mana anotevera anoenda sei, idanho rinoshamisa kudaro munzira kwayo yekurapa nyaya dzirikuenderera dzemijaho idzo dzakakamura nyika ino kwenguva yakareba. Mwedzi wandakazvarwa, mhirizhonga yakatekeshera nenyika, Mutemo Wekodzero Dzevanhu wakasainwa uye Martin Luther King akaiswa parufu.
Zvinosuruvarisa kuti zvakatora makore makumi mana, asi ndizvo richiri zuva rinoshamisa muAmerica. Iri izuva rekutanga mumakore makumi mana nyika ino yaitika chiitiko chakakosha chakasundira rusaruro mukati megomba. Zvisinei nedivi rerwendo rwaunobva, izuva rakanaka rekuve muAmerica.
Tags: 2008barack obamaObamazvematongerwo enyikazvematongerwo enyika bloggingzvematongerwo enyikaevanhu vezvenhau
Kugovera Kukundikana Kwangu (uye Kubudirira?)
Nov 5, 2008 na9:46 AM
Ndinobvuma, ndatenda kune yekutevera post. Ini ndaisatsigira Obama uye handina kumuvhotera. Ndinofunga akaunza zvinhu zvikuru kuCongress uye ndiye munhu wandinoda kuti apinde muhurongwa, handina kungomutsigira semutungamiri wenyika yose. Zvisinei, izvi hazvichinje chokwadi chekuti ndiye mutungamiri wangu uye ndiye ane mutoro wenyika yangu. Iniwo ndinovimba kuti anogona kuita shanduko yaakaita mushandirapamwe kuburikidza nezvose izvi. Asi, semi, chokwadi handitarisire zvakawanda zvichaunzwa pane zvakavimbiswa mumishandirapamwe nevezvematongerwo enyika kumativi ese enzira.
Nov 5, 2008 na3:18 PM
Nov 5, 2008 na5:41 PM
FWIW, ndakanakidzwa chaizvo neyako Obama-Vista post uye ndakanzwa iwo analogies aive akanaka uye akareruka-moyo. Ndakatozvitumira paTwitter.
Vanhu vanofanira kurerukirwa uye vapfuure nekutaura kwese kwesarudzo. Sarudzo makwikwi. Makwikwi anokwikwidza uye dzimwe nguva anoratidza zvikanganiso zvevavhoti pamwe nekusiyana. Pane zvakawanda zvinotibatanidza kupfuura kutiparadzanisa. Tese tiri mune izvi pamwe chete. VaObama ndivo VOSE vakasarudzwa semutungamiri weAmerica pari zvino, kwete vebato reDemocrats chete.
Tose ngatienderere mberi uye nekukasira kwaMwari uye tigadzirise matambudziko edu.
Nov 5, 2008 na5:43 PM
Nov 7, 2008 na5:47 PM
Doug, kurwiswa kwakashata kubva kuruboshwe kwakadzidziswa manomano kubva kurudyi. Kekutanga muhupenyu hwangu hwevanhu vakuru ndinodada kuva muAmerica uye ndinodada nenyika yangu. Yave nguva yekuti tiungane senyika kuitira zvakanaka, hupfumi, simba, kuunza mauto kumba, tipe tariro kune vari pasi, uye tinamate kuti tese tisimuke semauto eUnited kuseri kwehutungamiriri hwedu. Ndinovimba izvozvo vana vedu vachada kufanana naBarack pane kufanana naMike kana 50 cent. Kana dzidzo ikave yakakosha kune vechidiki vekuAmerica pane sarudzo dzaObama chichava chikonzero chikuru chazvo. Mune mamwe maguta eAmerica tine huwandu hwevatema hwekudonha hunodarika 75% inoita kuti tariro irambe iri mhenyu. Doug tarisa pane yangu post, nguva yedu yasvika http://www.blackinbusiness.org